Guddoomiyaha Maxkamadda Sare oo tababar u furay xubno ka tirsan garsoorayaasha, xeer-ilaaliyayaasha iyo qareennada Maxkamadaha gobolka Maroodijeex | Somaliland Post
Home News Guddoomiyaha Maxkamadda Sare oo tababar u furay xubno ka tirsan garsoorayaasha, xeer-ilaaliyayaasha...
Guddoomiyaha Maxkamadda Sare oo tababar u furay xubno ka tirsan garsoorayaasha, xeer-ilaaliyayaasha iyo qareennada Maxkamadaha gobolka Maroodijeex
Hargeysa (SLpost)- Guddoomiyaha Maxkamadda Sare ee Jamhuuriyadda Somaliland, ayaa maanta tababar u furay xubno ka tirsan garsoorayaasha, xeer-ilaaliyayaasha iyo qareennada Maxkamadaha gobolka Maroodi-jeex.
Guddoomiyaha Maxkamadda Sare Aadam Xaaji Cali Axmed, oo furay tababarka ayaa xubnihii ka soo qayb galay ku baraarujiyay, in aanay ka daalin cilmi-korodhsiga, waxaanu ugu baaqay in adeega garsoorka ee ay bulshada u hayaan, u qabtaan si daacadnimo, cadaalad, hufnaan iyo All-ka-cabsi ku dheehan yahay. Waxaanu yidhi, “Innagu adeeg bulsho ayaynu haynaa, waa in aynu u qabanaa si daacadnimo ah, oo cadaalad ku salaysan, oo hufnaan ah, oo Alle ka cabsi leh, Haddaad dulmi samayso ama aad cadaalad darro samayso qofka aad u samaysay adduu naftaadii dhaawacay. Dulmigu aduu kugu soo noqonayaa. Qofku haddii uu niyad fiican la yimaado oo uu dadaalo, oo cadaaladu waxay la ahayd haleelo xitaa haddii uu khaldamo ajar buu ku yeelanayaa”